Col. C\_llahi Yusuf oo codsigiisa ciidamada shisheeye u bedeshey codsi loogu hubeynayo ciidamo u badan beeshiisa.
Col. C\_llahi ayaa ka codsaday Itoobiya iney kala dhexgasho isaga iyo Maxamed Dheere. Gartoodana waxaa galay wasiirka arrimaha dibeda Itoobiya oo labada ninba ku qanciyey iney u hogaansanadaan go’aanada Itoobiya.
Wasiirka arrimaha dibeda Itoobiya, Mr. Souyoni ayaa sheegay iney Adis Sabab ka furayaan safaaradii Soomaaliya, Baydhabana ay u dirsanayaan ergey wakiil ka sii noqda safaarada Itoobiya ay ku yeelaneyso Soomaaliya.
Waxaa isi soo taraya isbedel siyaasadeed oo ka soo baxaya Col. C\_llahi, kaas oo ku saabsan dalbashadii ciidamada shisheeye. Waxaa soo ifbaxaya in codsigii lagu doonayey keenista ciidamo shisheeye uu hadda u muuqdo mid isku rogey in Col. C\_llahi uu doorbiday inuu is hubeeyo, sidaas daradeedna uu dhaqaale ugu raadsanayo sidii magaca booliska iyo ciidamo suga amaanka xaruunta dowlada uu u isticmaali lahaa.
Dagaaladii ka dhacay dhawaan magaalada Muqdisho oo ay isaga horyimadeen wadaadada iyo isbaheysiga la dagaalamayey wadaadada ayaa sabab u ahaa in siyaasada Col. C\_llahi Yusuf ay la soo baxdo wejigan cusub.
Waxaa u cadaatay Itoobiya in ay hadda nugul yihiin dagaaloogayaasha Muqdisho, fursadna ay u tahay Col. C\_llahi iyo Itoobiya in dagaalka Xamar lagu gacan siiyo dagaaloogayaasha si ay iyaguna u muujiyaan dheganuglaan dhinaca Itoobiya.
Waxaa la xaqiijiyey in gobolka Bari iyo Itoobiya ay taakuleyn hub u soo dirtay dagaaloogayaasha Muqdisho. Wax intaas dheer in deeq dhaqaale oo dhan hal milyan oo doolar ay isbaheysiga dagaaloogayaasha ay ka heleen ergey wakiil ka ah Israa'iil. Sidoo kale waxaan meesha ka marneyn in sirdoonka Mareykanka ay isbaheysiga ka kaalmeeyeen dhinaca xogta dagaalka iyo dagaalgelinta iyagoo u soo gudbiyey sawiro circa laga soo qaaday.
Col. C\_llahi ayaa lagula taliyey inuu dadaalkiisa ku dhiso ciidamo beeleed oo aad u hubeysan, kuwaas oo ku mushaar qaadanaya magaca ciidamo booliis ama kuwo mileteri. Taas waxey fursad u siineysaa inuu xoog ku qabsado Kismaayo iyo Xamar kadib marka uu xaqiijiyo iskaashi ay isugu soo dhowaanayaan dagaaloogayaasha hubeysan. Col. C\_llahi ayaa aaminsan ineysan hadda jirin cid ciidan u soo direysa Soomaaliya ama dhaqaale ku taagereysa dowladiisa oo hadda qarka u saran in ay burburto.
Waxaa la helay warar ka soo baxay wadamada reer galbeedka oo ku saabsan inaan dhaqaale la gelin Karin dowlad uu horkacayo nin horay u soo ahaa dagaalooge dhiig badan daadiyey, waxeyna wararkaas ay saadaalinayaan in dowlada Col. C\_llahi ay burburi doonto haddiiba ay sii xoogeysato abaarta ka jirta Soomaaliya, taas oo ay sabab uga dhigeen hogaan xumadiisa siyaasadeed.
Col. C\_llahi ayaa la filayaa inuu taageero dagaalka hogaamiye kooxeedyada Muqdisho ay kula jiraan wadaadada si uu si ku meelgaara uga helo iney dhinaca siyaasada kala jaal noqdaan. Tanaasulka keenista ciidamada shisheeye ayuu ka dhiganaya qiil uu ku muujinayo inuu u tanaasuley danaha reer Muqdisho, taas oo aan ahyn dhab waayo runtii arrintaasa ayaa ah mid uu ugu daneynayo inuu dhaqaalaha dowlada ku maalgeliyo maleeshiyadiisa intii dhaqaalahaas uu ku bixin lahaa baada ay ka doonayaan dagaaloogayaasha Muqdisho.